Pagelines 2.0 Mamerina amin'ny laoniny ny WordPress Theming and Ecommerce | Martech Zone
Alakamisy, Desambra 8, 2011 Douglas Karr
WordPress dia nanohy nanao asa mahafinaritra… tsy ny fanavaozana ny sehatr'izy ireo ihany fa ny fomba nanokafan'izy ireo azy ho fampidirana antoko fahatelo. Ny plugins sy ny lohahevitra ho an'ny sehatra dia eny rehetra eny, ary tena takatry izy ireo. Orinasa vaovao novolavolaina nanodidina ny lampihazo ihany koa, Pagelines anisan'ireny! Tena faly ny orinasa nanambara ny fanombohana ny Pagelines 2.0, rafitra lohahevitra iray manova ny WordPress.
Pagelines 2.0 mirehareha amin'ireto fiasa manaraka ireto:
Hisintona & Mitete Vita tsara - Farany! Sehatra iray mitete-mitete izay mamela anao hanangana tranokala amin'ny fomba matihanina. Ny rafitra voalohany misy "faritra" azo sintonina amin'ny famolavolana tranonkala matihanina.
manaiky Design - Ny valin'ny PageLines dia hamaly mavitrika ny famahana ny browser na ny fitaovanao.
Layout Control - Hisintona & mitete fotsiny mba hametrahana ny refin'ny fizotran'ny atiny. Safidio isaky ny pejy isaky ny pejy ireo safidy 5 nataonao.
Fizarana Kloning - Fizarana manao kopia mba hahafahanao mampiasa azy ireo imbetsaka amin'ny pejy iray ihany. Ny fizarana tsirairay dia samy manana ny safidiny avy ary voafehy tsy miankina.
Typography - Misafidiana endri-tsoratra amin'ny Internet azo antoka 50 sy Google. Ovay tanteraka ny fijery ny typografikan'ny tranonkalanao segondra.
Fitantanana pejy manokana - Ankehitriny dia manana fifehezana taonina amin'ny karazana pejy ianao. Ao amin'ny 2.0 dia mampiditra pejy manokana izy ireo hanampy anao hifehy ny pejy toy ny sokajy sy ny arisiva.
Fanaraha-maso ny loko - Ampiasao ny fifehezana loko mba hanovana ny paleta amin'ny tranokalanao afaka segondra. Azonao atao ihany koa ny manova ireo fomba fanaingoana sy manampy sary eo afovoany.
Pagelines 2.0 dia manohana fanampim-panazavana hampidirina ny sehatra ecommerce azy ireo ihany koa. Ity no fonosana ecommerce iraisana faharoa hitako (WooCommerce ilay iray hafa).
Tsara indrindra, Pagelines manana ekipa mpanohana mpanjifa, dinika ho an'ny mpampiasa ary antoka miverina amin'ny vola 30 Andro. Mpankafy lehibe (sy mpiara-miasa) amin'i Pagelines izahay, rehefa nanoratra momba ny mahavariana drag & drop WordPress sehatra teo aloha.
Tags: foto-kevitrahisintona ary hilatsaka ny wordpressecommerce wordpressfivarotana wordpressWordpress themeWordpress theming
Dec 22, 2011 ao amin'ny 7: PM PM
Hatreto ny sehatra WordPress mandroso indrindra any, dia manome soso-kevitra fatratra ny PageLines ho an'ny mpanjifako rehetra aho. Ary ny 2.0 dia nahatonga ny fananganana tranokala mahafinaritra miaraka amin'ny WordPress ho mahafinaritra kokoa! Tiavo ny vokatra sy ny fanohanana!
Dec 22, 2011 ao amin'ny 9: PM PM
Manaiky aho - nanangana ny lohahevitra voalohany ho an'ny mpanjifa izahay ary tianay!